Redis 6.0 inouya neiyo itsva RESP3 protocol, yakawedzera rutsigiro, kumhanya uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yedhatabhesi injini Redis 6.0 yakatoburitswa kare uye iyo itsva RESP3 protocol inosvika sechinhu chikuru cheiyi vhezheni, pakati pezvimwe zvinhu. Kune avo vasingazive yeiyi injini yedhatabhesi ivo vanofanirwa kuziva kuti ine hukama nekirasi yeNoSQL masystem.
Redis inopa Memcached-senge mabasa ekuchengetedza kiyi / kukosha kwedhata, inowedzerwa nerutsigiro rwemafomati akaumbwa edhata senge rondedzero, hashes, uye seti, pamwe nekugona kumhanyisa server-parutivi zvinyorwa muLua.
Kusiyana neMemcached, Redis inopa zvachose data rekuchengetedza pane diski uye inovimbisa kuchengetedzeka kwedhatabhesi kana pakaitika kudzima kwechimbichimbi.
Nezve manejimendi manejimendi, ipa mirairo senge kuwedzera / kuderera, zvakajairika mashandiro pane zvinyorwa uye seti (mubatanidzwa, mharadzano), kuisazve zita, kusarudzwa kwakawanda uye kugadzirisa mabasa.
Se tsigira maviri ekuchengetedza modes: nguva nenguva kuwiriranisa dhata pane diski uye shandura log pane diski. Muchiitiko chechipiri, kuchengetedzwa kwakazara kweshanduko dzose kunovimbiswa. Izvo zvinokwanisika kuronga tenzi-muranda data kudzokorora pamaseva mazhinji, inoitwa mune isiri-yekuvharira maitiro. Shambadzira / nyora mameseji modhi inowanikwawo, mune iyo chiteshi inogadzirwa, iwo mameseji ayo anogoverwa kune vatengi nekunyorera.
Chii chitsva muRedis 6.0?
Default, imwe RESP3 protocol inokurudzirwa, asi kubatana kunotanga mu RESP2 maitiro uye mutengi anochinjira kuchirongwa chitsva chete kana murairo mutsva uchishandiswa pakutaurirana kubatana. RESP3 inokutendera iwe kudzosera zvakananga mhando dzemhando dzakaomarara pasina kukosha kwekushandura zvakajairika arrays kudivi remutengi uye kupatsanura mhando dzekudzoka.
Imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi nyowani ndeye skuwana kudzora rondedzero rutsigiro , que inobvumidza kuona chaizvo mashandiro anoita mutengi uye asingakwanise.
Kuita kwe ACL hazvireve kuti inowedzera pamusoro uye haina kana basa. Iyo interface module yakave yakagadzirirwawo ACL, achikubvumidza iwe kuti ugadzire yako wega nzira dzechokwadi. Kuti utarise kwese kutyorwa kweACL, iyo ACL LOG yekuraira inopihwa. Kugadzira makiyi echikamu asingatarisike, iwo "ACL GENPASS" rairo rakawedzerwa, uchishandisa HMAC yakavakirwa paSHA256.
Tinogona zvakare kuwana iyo sTsigiro yevatengi-padivi dhata caching. Pane ma modes maviri aripo Kuyananisa mutengi-padivi cache neiyo dhatabhesi nyika:
Chengetedza mumakiyi evhavha ayo mutengi akambokumbira kuti akuzivise nezve kurasikirwa kwekukosha kwechinyorwa mune cache yemutengi.
Iyo "nhepfenyuro" mashandiro, umo mutengi anonyorera kune mamwe makiyi ekutanga uye sevha inozivisa kana makiyi ari mukati meaya ekutanga prefixes. Kubatsira kwe "transmit" modhiyo ndeyekuti hapana imwe ndangariro inopambadzwa kuseva kuchengeta kadhi rezvakachengetedzwa padivi revatengi, asi kubvisa pane kuwanda kwenhamba yemameseji anotumirwa.
Cluster Proxy yakawedzerwa, proxy yeiyo Redis server sumbu, iyo inokutendera iwe kuronga basa revatengi vako nemaRedis akawanda maseva, semuchiitiko. Proxy inogona kuendesa zvikumbiro kumatanho nedhata rakakodzera, kubatana kwakawanda, kugadzirisazve sumbu kana paine kukundikana kwenzvimbo, uye nekuita zvikumbiro zvinotambanudza node dzakawanda.
Yakanyanya kuvandudzwa API yekunyora ma module, zvichinyatso shandura Redis kuita fomati inobvumidza iwe kuti ugadzire masisitimu nenzira ye plug-ins.
Iyo PSYNC2 replication protocol yakagadziridzwa, Izvi zvakabvumidza kusarudzanisa patsva kuti kuitwe kazhinji, nekuwedzera mikana yekuziva yakajairwa replica uye tenzi.
Uye zvakare inomira kunze kurumidza kurodha maRBB mafaera. Zvichienderana nekuzadzwa kwefaira, iko kumhanyisa kuri makumi maviri kusvika makumi matatu muzana. Inoshamisa nekukurumidza kuitiswa kweINO mutemo pamberi pehuwandu hwakawanda hwevatengi vakabatana.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo kana kurodha iyo nyowani vhezheni, unogona kuzviita kubva ku next link
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Redis 6.0 inouya neiyo itsva RESP3 protocol, yakawedzera rutsigiro, kumhanyisa uye zvimwe
qmmp 1.4.0 yakatoburitswa uye idzi ndidzo shanduko dzakakosha kwazvo